Dardar-gelinta Heerkaada Guusha si aad ugu Hesho Goolashaada
Hadda oo aad awoodid inaad ku guulaysato, waxaa jira hal dhibic oo muhiim ah: xoojinta howshaada.
Maxay tahay ujeedada? Kordhi fursadaha guusha mashaariicdaada.
Sida aynu wada ognahay, gaaritaanka hadafyadaada ma aha hawl fudud, taas oo aan u baahanahay talooyin naga caawiya inaan si fiican u fahamno.
Hagaajinta heerka guushaada Waa tallaabo aan la dayacin! Run ahaantii ma aha mar walba sahlan, waxay yihiin waxyaabo yaryar oo soo ururiya, taasina waxay ku dambayn doontaa natiijo ka dhalan karta niyaddaada iyo hadafyadaada. Qofna ma doonayo in la jebiyo. Fiiri fiidyowgaan gaaban ee 3 min oo ogow talooyinka kaa dhigi doona guushaada si sahlan!
Fiidiyowkani waxaad ka heli doontaa fikrado iyo talooyin kaa caawin doona inaad kordhiso xawaaraha guushaada si aad u gaarto yoolalkaaga ..., iyo wax kasta oo ka mid ah 5:
1) Caddayntaé : Qeexida ujeedooyinkaada waa muhiim, waa aasaaska.
2) Go'aanka : maalmaha waa saacadaha 24 keliya, waa waqtigii la bilaabi lahaa!
3) Deegaanka : abuurista daryeeli xannaaneynaya ayaa ku kordhinaya guusha.
4) Fududeynta : Aqbaar naqdiga si aad u guulaysato, waxay kaa caawin kartaa inaad dib ugu noqoto waddada saxda ah.
5) Xiriirka jirka / maskaxda : waxaa si fiican loo yaqaanaa maskaxda iyo jirkuna waa la isku xiran yahay, nasasho ku haboon baa jira!
Iyada oo talooyinkan fudud ee aad ku ridi karto, waxaad yeelan doontaa
Kaararka oo dhan gacantaada, ha u ogolaan naftaada nadiif ah iyo tagaan waddada guusha!
READ Sidee loo dejiyaa hadafyo la isku halleyn karo?
Kordhi heerkulka guusha si aad si wacan ugu gaarto hadafyadaada. May 12th, 2018Tranquillus
horeExcel Tips First Part-Doping Your Productivity
socdaSi dhakhso ah wax u baro oo si fiican u xasuuso-Ka tag Dhamaadka Dhimashada Dhamaadka Shaqada